- बैशाख ३१, २०७६, मंगलबार, काठमाडौं
सरकारले एक लाखभन्दा बढी बेरोजगारलाई ३० दिनको रोजगारी दिन ‘कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना’ कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । यसका लागि सरकारले सबै स्थानीय तहमा दुई अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ ससर्त अनुदान पठाइसकेको छ । स्थानीय तहले न्यूनतम पाँच लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्मको अनुदान पाइसकेका...
- बैशाख १६, २०७६, सोमबार, विराटनगर
प्रदेश नं. १ सरकारको समाजिक विकास मन्त्रालयले ठूलो संख्यामा कर्मचारी माग गरेको छ । प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा खटाईनेगरी एकैपटक ११६ जना कर्मचारी माग गरिएको हो । सम्पूर्ण जानकारीको सूचना तल अपलोड गरिएको छ ।
विभिन्न जिल्लाबाट मागअनुसार प्रहरी कार्यालय स्थापनाका लागि नेपाल प्रहरीले २२ हजारभन्दा धेरै दरबन्दी माग गरेको छ । सात सय ५० नयाँ कार्यालय स्थापना र चार सय ४२ कार्यालय स्तरोन्नतिका लाथि थप जनशक्ति आवश्यक भएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी उत्तमराज सुवेदीका अनुसार तत्कालका लागि २२ हजार ४ सय...
- कार्तिक १२, २०७५, सोमबार, काठमाडौँ
मलेसिया र नेपालबीच श्रमिक आपूर्तिसम्बन्धी श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । आज आयोजित समारोहमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाली मानव संसाधनमन्त्री एम कुलासेगरानले उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । ६ महीनादेखि रोकिएको मलेसियाको रोजगारी खुल्ने भएको छ । लामो प्रयासपछि नेपाल र मलेसियाबीच कामदार आपूर्तिका विषयमा...
- जेठ ३१, २०७५, बिहिबार, काठमाडौं
काठमाडौं/शिक्षक सेवा आयोगले प्राथमिक तहमा खुला प्रतिष्पर्धाका लागि विज्ञापन खुलाएको छ । आयोगका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा. तुलसीप्रसाद थपलियाले दिएको जानकारी अनुसार कुल ९ हजार ९ सय ९६ पदका लागि विज्ञापन आह्वान गरिएको हो । प्राथमिक तह, तृतिय श्रेणी शिक्षक पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गरिएको हो । थपलियाका अनुसार अन्य...
राष्ट्रबैंकले एकैपटक माग्यो १५१ कर्मचारी (सुचना सहित)
- फाल्गुन ११, २०७४, काठमाडौं
बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको नियामक नेपाल राष्ट्रबैंकले एकैपटक निकै ठूलो संख्यामा जागिरको अवसर खुलाएको छ । राष्ट्रबैंकको जनशक्ति व्यवस्थापन विभागले एक सूचना प्रकाशित गर्दै तीन पदमा १५१ का लागि जागिरको अवसर खुलाउँदै अनलाइन दरखास्त आह्वान गरेको हो । केन्द्रीय बैंकले तृतीय तहको अधिकृत स्तरको सहायक निर्देशक पदमा ४५ कर्मचारी मागेको...
नेपाल आयल निगमले माग्यो ९५ कर्मचारी
- माघ १४, २०७४, काठमाडौं
नेपाल सरकार स्वामित्वको नेपाल आयल निगम लिमिटेडले विभिन्न पदमा ९५ जना नयाँ कर्मचारीका लागि आवेदन माग गरेको छ । एक सूचना प्रकाशित गर्दै निगमले खुला तथा समावेशी रुपमा पदपूर्ति गर्ने गरी शुक्रबार विभिन्न तहमा ९५ कर्मचारी माग गरेको हो । माघ १२ गतेबाट २१ दिनसम्म आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ।...
रामधुनी नगरपालिकाले माग्यो दैनिक ज्यालादारीमा कर्मचारी
- माघ ९, २०७४, रामधुनी
सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकाले कर्मचारीको लागि आह्वान गरेको छ । नगरपालिकाले चौथो तह (प्राविधिक) अन्तरगतको अमिन पदमा कर्मचारी आह्वान गरेको हो । माघ ७ गते नगरपालिकाले प्रथम पटक सुचना जारी गरेको हो । अमिन पदको लागि कर्मचारी दैनिक ज्यालादारीमा लिने सुचनामा उल्लेख गरिएको छ । सात दिन भित्र फारम भरी दरखास्त...
रामधुनी नगरपालिकाले माग्यो करारमा कर्मचारी
- २०७४ पौष ०५, रामधुनी
सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकाले करारमा कर्मचारीको लागि आह्वान गरेको छ । नगरपालिकाले सुचना प्रविधि अधिकृत पदको लागि सुचना जारी गरेको हो । संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम अन्तरगत नगरले प्रथम पटक पौष ३ गते सुचना जारी गरेको हो । नगरपालिका भित्र काम गर्नुपर्ने गरी...